Kuwani waa labada dukumiinti ee cusub ee ka soo muuqan doona Apple TV + | Waxaan ka socdaa mac
Kuwani waa labada dukumiinti ee cusub ee ka soo muuqan doona Apple TV +
Mar labaad, waa inaan ka hadalnaa dokumenteriyada ay Apple rabto ballaadhi dalabka adeegga fidinta fiidiyowgaaga, halkaas oo aan sidoo kale ka heli karno taxane, filimaan iyo bandhigyo telefishan. Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa howlgalisay labo dukumiinti oo cusub oo diirada saaraya muujinta guulaha ay ka gaareen warshadaha filimada ragga iyo dumarka madow.
Gaar ahaan waxay ku saabsan tahay labo documentary. Dhinaca aan ka helno Lambarka Koowaad ee Warqadda Wicitaanka: Haweenka Hogaaminaya Madow ee Hollywood iyo dhinaca kale Lambarka Koowaad ee Warqadda Wicitaanka: Ragga Hogaaminaya Madow ee Hollywood. Mid kasta oo ka mid ah dokumenteriyadu waxay muujinayaan doorka haweenka iyo ragga si madax-bannaan warshadaha filimada.
Lambarka Koowaad ee Warqadda Wicitaanka: Haweenka Hogaaminaya Madow ee Hollywood waxay diiradda saari doontaa haweenka (sida cinwaanku tilmaamayo). Wax soo saarka fulinta waxaa bixiya Musharaxa Oscar Angela Bassett iyo guuleystaha Oscar Halle Berry.
Documentary-gaani wuxuu noqon doonaa Waxaa daadihinaya Shola Lynch halkaas oo shaqada aasaasiga ah ee atariishooyinka madow ee hore ee wadada u xaadhay Bassett, Berry iyo kuwa kale oo badan "la baadhay oo la iftiimiyay."
Documentary labaad, Lambarka Koowaad ee Warqadda Wicitaanka: Ragga Hogaaminaya Madow ee Hollywoodiyo raaci doona isla fikradda marka loo eego tii hore "sheekooyinka iyo waaya-aragnimadii jilaayaashii madowga ahaa ee hore ee jidka u xaadhay Foxx, Hart, iyo kuwa kale."
Dokumentigan kale ayaa ah waxaa soo saaray Jamie Foxx iyo Kevin Hart waxaa hogaamin doona Hollywood-ka Oscar ee ku guuleystey Reginald Hudlin.
Marka laga hadlayo laba dukumiinti oo Apple ay hadda hawlgelisay, weli waxay ku jiraan heerarkoodii horeMarkaa weli waxay qaadan doontaa dhawr bilood bilowga adeegga fidinta fiidiyowga ee Apple in lagu dhawaaqo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Kuwani waa labada dukumiinti ee cusub ee ka soo muuqan doona Apple TV +
Faallooyinka ugu horreeya ee AirTags ayaa muuqda
Nomad wuxuu hoos u dhigayaa xarig ku habboon AirTag ee muraayadahaaga iyo keychain